इमान्दार नेपालीहरु जुवातास खेल्दैनन् : प्रवक्ता काठमाडौ प्रहरी – ABC KHABAR
इमान्दार नेपालीहरु जुवातास खेल्दैनन् : प्रवक्ता काठमाडौ प्रहरी
November 20, 2015 ABC Desk समाज
कानुनतः जुवातास वर्जित छ । यसले व्यक्ति, परिवार, समाज र मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थालाई तहसनहस बनाउछ । त्यसैले यो दण्डनीय छ । यद्यपि, मानिसहरु लुकीछिपी यसैमा रमाइरहेका छन् । खेल्छन्, खेलाउँछन् पनि । अक्सर चाडपर्वमा मानिसहरु जुवातास बढी खेलिरहेका हुन्छन् । काठमाडौ प्रहरीले साँखु, गौशाला लगायतवाट केही समूहलाई नगदसहित नियन्त्रणमा लिएको छ । यसले तस्करी, कालोवजारी तथा अन्य अपराध हुनमा भूमिका खेल्छ भन्ने प्रहरीको निचोड छ । पछिल्लो समयमा भैरहेको असहज अवस्थामा जुवातास मौलाइरहेको हुनसक्ने प्रहरीको वुझाई छ । प्रस्तुत छ एवीसीले जुवातास र वजारमा मौलाएको कालोवजाीको सम्वन्धमा काठमाडौ प्रहरी परिसर प्रवक्ता एसपी विश्वमणी पोखरेलसँग गरेको कुराकानी ।
प्रहरी अधिकारीहरु स्वयम् जुवातास खेल्नेहरुविद्ध प्रहरी कारवाही कठीन हुन्छ भन्छन् । सत्र जनालाई नियन्त्रण गर्न कसरी संभव भयो ?
काठमाडौ उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरुमा ठूलो मात्रामा जुवा तास खेलाईएको र खेलिरहेको भन्ने सूचना प्राप्त भयो । तिनीहरु स्वयम् खेलाडीहरुको परिवारवाट प्राप्त थियो । परिवारको वातावरण विग्रेको , कलह बढेको भन्ने ग्ुनासोहरु आएको थियो ।
सूचना संकलनका लागि टोलीहरु खटाएका थियौं । यही क्रममा गौशालामा जुवा खेलाईरहेको सूचना प्राप्त भयो । केशध्वज राणको घर थियो । जहाँ हामीले परिसरवाट सिभिल टोली खटायौं । प्रहरीले वीस लाख नगदसहित सत्र जना मानिसहरु नियन्त्रणमा लियो । एक जना खेलाडि ४० लाख लिएर गैसकेका थिए । उनै मानिस वाहिर निस्कदा प्रहरी टोली भित्र छिरेको थियो ।
जुवामा रमाउनेहरु कुन पृष्ठभूमिका देखिन्छन् ? उनीहरुको आयश्रोत के देखिन्छ?
जुवा खेल्नेहरुको अध्ययन गर्दा कि त उसले गलत क्रियाकलाप गरेर या अवैध धन्दा गरेर कमाएका हुनछन् कि राज्यको ठ्रलो पद र प्रतिष्ठामा रहेकाहरुले भ्रष्टचार गरेर कमाएका हुन्छन् । यसमा त्यही देखिएको छ । किनभने उच्च पद र प्रष्ठिामा रहेकाहरु त यहाँ देखिएन । तर इमान्दार नेपालीहरुले अहिलेको अवस्थामा जुवा खेल्ने हैसियत राख्दैन ।यनिीहरु पनि अवैधरुपमा पैसा कमाउनमा संलग्न भएको देखिन्छ ।
के प्रहरीले जुवा खेल्नेहरुको रकमको श्रोतमाथि पनि अनुसन्धान गर्छ ?
रकमको श्रोत खोज्नु जररुी छ । जुवा खेल्नेहरु त खेल्छन् तर खेलाउनेले किन रिक्स लिन्छन् ?
अहिलेसम्म प्रहरीले त्यसो गरेको छैनौ । तर यो जरुरी भैसकेको अवस्था छ । जुवामा भेटिएको रकमको श्रोत खोज्नु पर्ने जरुरी भैसको छ ।
हामीले अहिलेसमम्म वुझेको अवस्थामा केशध्वज राण हामीले एटेम्प्ट गरेको मान्छे हो । लुकाएर खोलाउने गथ्र्यो । जुवामा जितेको मान्छेले दश प्रतिशत लिने गरेको खुल्न आएको छ । अन्तत खेलाउनेले ठूलो रकम हात पार्ने गरेको देखिन्छ । जुन रकमको लोभमा अवैध हो भनेर जानी जानी आफनै घरमा खेलाएको देखिन्छ । प्रतिष्ठामा असर पुर्याउँछ भन्ने थाहा हुदा हुदै पनि खेलाइरहेको अवस्था देखिन्छ ।
खेलाडीलाई के कस्तो सम्मान र व्यवस्था गरेको पाइन्छन् ?
जहाँ पनि के देखिन्छ भने, ठूलो जुवा भने पछि त्यहाँ सवैथोकको व्यवस्था हुने गरेको देखिन्छ । ठूलो जुवा भने पछि त्यहाँ निशुल्क खानेको व्यवस्था हुन्छ । मदिराको व्यवस्था हुन्छ । केही स्थानहरुमा महिलाहरु पनि उपलब्ध हुन्छन् । खेल्ने खेलाडीहरुलाई ठूलो सम्मान हुन्छ । उनीहरुको विशेष किसिमले सम्मान गरिएको हुन्छ । उनीहरुको इच्छाअनुरुप सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको देखिन्छन् ।
क्यासिनोमा प्रवेश निशेध गरेर मात्र जुवा खेल्न आएका होइन । म मान्दिन । धेरै संख्या र स्थानहरुमा जुवा खेलाउँछ भन्ने हामीलाई सूचना आएको छ । त्यसैले क्यासिनोमा खेल्न र वाहिर खेल्नु फरक हो भन्छु म । भित्र खेल्नुभन्दा वारि खेल्नुमा सहज हुन्छ । खुलेर खेल्न पाउँछन् । नियम पनि फरक हुन्छ । वाहिर खेल्ने र खेलाउनेको लतका कारण पनि उनीहरु इसलाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।
त्यसलाई कानुनी हिसावले, कडा कानुन र प्रहरी कारवाहीले मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
राजधानीमा जुवा के कति पोइन्छसम्म खेलेको पाइयो त ?
मैले प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा हामीले खेलाडी, खेलाउने, सूचना दिनेहरु र च्याँखे थाप्नेहरुको आधारमा हामीले बुझ्ने हो ्। तासको कुरा गर्दा त सामान्य पान दश रुपैया देखि दशौ हजारसम्म पोइन्टमा खेल्ने गरेका छन् । जुवाकै कुरामा दुई चार हजारको हारजीत देखि दुई चार करोडसम्मको हारजीत हुने गरेको खेल्ने गरेको देखिन्छ ।
खेल्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियतको आधारमा जुवातास खेल्ने गरेको पाइन्छन् । जुन उसले अवैध श्रपमा आर्जन गरेको आर्थिक हैसियतको आधारमा जुवातास खेल्ने गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्थासँग जुवाको के सम्वन्ध छ ?
होइन, यहीसँग ट्याक्कै त्योसँग सम्वन्ध छ भन्ने सकिन्न । तर जव मुलुकमा शान्ति सुरक्षा अवस्था कमजोर हुन्छ, प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीहरुले शान्ति सुरक्षाको लागि खटिनु पर्छ, सक्रिय हुनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा यस्ता मानिसहरुको चलखेल भने बढ्छ । जुवातास, तस्करी, कालोवजारी लगायतमा संलग्न हुन्छन् । किनभने त्यो समयमा राज्यले पहिलो प्राथामिकता शान्ति सुरक्षामा दिएको हुन्छ । साधन स्रोत त्यहाँ परिचालन गरेको हुन्छ । त्यसले गर्दा उनीहरुले पनि मौका छोप्न खोज्छन् । केही मात्रामा असर भने पक्कै छ ।
जुवातासले परिवार समाजमा केकस्ता असर पारेको देखिन्छन् ?
पहिलो कुरा त, धेरैको परिवार विग्रेको छ । माथिल्लो परिवार पनि सडकमा पुगेको देखिन्छन् । ठूलो रकमको जुवातासले मुलुकमा तस्करी, कालोवजारी, मान्छेको मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा जुन छ त्यसलाई असर त गरिनै हाल्छ । इमान्दार मान्छेहरुको मनोवल गिर्छ यसले । किनभने इमान्दार मान्छेले इमान्दारिताको साथ जुन जीवन धानिरहेको हुन्छ, रातारात सम्पति कमाएर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न हुनुले समाज र समाजको भ्यालुलाई नै र मुलुकलाई नै ठूलो क्षति पुर्याइरहेको हुन्छ ।
नागरिकको के भूमिका के हुन्छ ?
यहाँ सवैभन्दा त नागरिकको ठूलो भूमिका हुन्छ हामी सचेत हुने हो भने । किनभने साजिक मूल्यमान्यताविरुद्धका सवैखाले क्रियाकलाको विरुद्ध सवै नागरिकले औला ठड्याउने हो भने यसमा ह्रास आउने हो । तर सूचना पनि नदिने, डराउने या किन दिने भनेर वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा हामी दिनप्रतिदिन कमजोरी भैरहेका छौं । हामीले जहिले पनि गलत क्रियाकलापमा संलग्नविरुद्ध औला ठडयाउन सक्यौं भने, सूचना दियौं भने, यसवाट हामी नै प्रभावित हुन्छौं, यसको क्षति हामी सज्जन नागरिकले व्यहोर्नु पर्छ भन्ने सोच्ने हो भने या सूचना प्रहरीलाई दियौं भने त्यसले सुधारका लागि सहज बनाउन सक्छ ।
मुलुकको पछिल्लो अवस्था र उपत्यकामा पार्न सक्ने चुनौतिहरु के के हुनसक्छन् ?
हामी असहजता तर्फ गै्ररहेका छौं । नागरिकले खासगरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु सहज रुपमले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दैनन्दिन नागरिकको जीवन कठीन बन्दै गएको छ । हाम्रो वितरण प्रणली पनि निष्पक्ष र पारदर्र्शी हुन सकेन भनेर गुनासो बढदै गएको छ । यो अवस्था अझै रहीरहयो, सरकारी संयन्त्रमा रहेकाहरु इमान्दार र निष्पक्ष बन्न सकेनौ, वितरण प्रणलीलाई व्यवस्थि तगर्न सकेनौ भने जनताको असन्तुष्टिको रेखा क्रस हुन्छ ।
त्यसले लुटपाट, चो।री,डकैटी तथा असुरक्षाको वातावरण बन्दै जानसक्छ । जुन विस्तारै राज्यको विरुद्ध, राज्य संयन्त्रको विरुद्ध र यस्ता वातावरण वनाउन भूमिका खेल्नेहरु व्यक्ति, समूह र संस्थाको विरुद्ध, उनीहरुको सम्पति, पारिवारिक सुरक्षाको विरुद्ध नागरिकहरु आक्रोशित हुन सक्छन् । आक्रमण हुन सक्छन् । हिंसा हुन सक्छन् । त्यसैले यस्ता संभावनाहरुप्रति सचेत हुनुपर्छ ।
पछिल्लो अवस्थामा कालोवजारी, चोरी लगायतका अपराधहरु नियन्त्रण हुन सकेन भन्छन् नि ?
अहिले अभाव छ, काठमाडौमा एउटा न्यून आय भएका मानिसहरु छन् अर्कोचाही रातारात धनी भएकाहरु छन् । त्यो समूह रातारात धनी भएकाहरु अभाव र कठीनाई व्यहोर्नु भन्दा जतिसुकै मूल्यमा पनि दैनिकीलाई सहज बनाउन लागिपर्दछन् । जसले गर्दा यही मौकालाई उपयोग गर्दै तस्करी, अवैध रुपमा उस्ता काम गर्ने, कालोवजारी गर्ने भैरहेको हामीले पनि देखेका छौं, सुनेका छौं र हामी त्यसको पछि लागिरहेका पनि छौं ।
तर सवैभन्दा समस्या के हो भने वेच्ने र किन्नेको मिलेमतोले गर्दा हामीलाई समयमा सुचना नआउने, पुग्दा प्रमाणहरु नष्ट भैसक्ने हुदा कारवाही गर्न नसकेका हौं । कतिपय अवस्थामा कठीनाइ भैरहेको छ ।
त्यसैले हामी सवै नागरिकले यस्तो असहज अवस्थामा एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई मार पर्ने, अप्ठयारोमा पार्ने खालका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने, कालोवजारी गर्ने, ठूलो मात्रामा पैसिा कमाउनेहरु विरुद्ध सवै एक भएर लागौं भन्ने म आम नागरिकलाई अनुरोध गर्दछु ।
कालोवजारी र अपारधको वारेमा प्रहरीलाई कसरी खवर गर्ने ?
सयमा कल गर्न सक्नुहुन्छ । महानगर प्रहरीमा सूचना दिदा पनि हुन्छ । प्रहरी कारवाहीमा लागिरहेको छ । केहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएको पनि छ । सूचना दिनुहोस् । हामीले कानुनी दायरामा ल्याएको भन्दा ठूलो मात्रामा कालोवजारी भैरहेको छ भन्ने सूचना हामीलाई पनि आएको छ । हामीले प्रहरी खटाइरहेका पनि छौं ।
नीजि माध्यममार्फत ठूलो मात्रामा तेल भित्रिएको छ । त्यसले एक थरी नागरिकलाई मार परेको छ भने अर्कोलाई सहज पनि बनाएको छ । कोही लामो समय लाइनमा वस्न चाहन्नन् । त्यसले धेरै मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भएका छन् । जसले तस्करीको मनोवल बढेको छ । हामीसँग त्यसको तथ्यांक छैन । किनभने यस्तो काम लुकीछिपी भैरहेको छ ।
संभावित चुनौतिको सामना गर्न प्रहरीको के कस्ता रणनीतिहरु छन् ?
मैले जति पनि भने ती चुनोतिहरु आउन सक्छन् भनेर हामीले अनुमान गरेका छौं त्यही अनुरुप हामीले सुरक्षा निकायमा व्रिफिङ गर्ने, परिचालन गर्ने योजना बनाउने गरेका छौं । भोलि आउन सक्ने चुनौतिलाई धान्न सक्ने गरी प्रहरी अधिकृतलाई तयारी अवस्थामा राखेका छौं ।
औषधि बोकेको ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार
﻿वेश्यावृतिको थलो बन्दै इटहरी